Scribble 🥇 Ngena kwaye uzonwabele kwi-Emulator
Scribble . Ukuphucula isigama kulo naluphi na ulwimi ngumsebenzi ofuna ukuzinikezela. Ungathini ukuba, ukunceda kulo msebenzi unzima, unokuthembela kukhuthazo lomdlalo okonwabisayo kunye nokhuphiswano olukhulu? Imalunga neScribble, umdlalo wamagama waseMelika, owenziwe ngo-1930 kwaye ukusukela ngoko waguqulelwa kwiilwimi ezingama-22.
Scribble: indlela yokudlala inyathelo ngenyathelo?
Ukudlala backgammon online simahla, nje landela le miyalelo ngamanyathelo ngamanyathelo :
inyathelo 1 . Vula isikhangeli sakho osithandayo kwaye uye kwiwebhusayithi yomdlalo emulator.online.
inyathelo 2 . Nje ukuba ungene kwiwebhusayithi, umdlalo sele uza kuboniswa kwiscreen. Kuya kufuneka ukhethe igama oza kuqala ngalo ukudlala. Ukuba unqwenela, unokukhetha umfanekiso. Cofa " Dlala " kwaye ungaqala ukudlala, khetha ukudlala ngokuchasene nomatshini okanye dlala nomhlobo omnye okanye nangaphezulu.
Inyathelo 3. Nanga amanye amaqhosha aluncedo. Unga " Yongeza okanye susa isandi ", Cinezela" umdlalo "iqhosha kwaye uqale ukudlala, unga" Misa isikhashana "And" Phinda Uqalele "nangaliphi ixesha.
Inyathelo 4. Ukuphumelela umdlalo kufuneka wenze amagama ebhodini. Unobumba ngamnye unamanqaku . Nabani na ofumana amanqaku maninzi ekupheleni komdlalo uya kuphumelela.
I-Scribble ngumdlalo webhodi apho abadlali bayo (2-4) bazama ukongeza amanqaku ngokwakha Amagama adibeneyo , kusetyenziswa amatye oonobumba ebhodini ezahlulwe zaba Izikwere ezingama-225 .
Abantu abaninzi bakholelwa ukuba abenzi beSribble UJames brunot kwaye UHelen Brunot , kodwa enyanisweni yayingengombono wabo, kunoko Umqambi weSribble nguAlfred Butts , umyili wezakhiwo wasePoughkeepsie, kwiRhulumente waseNew York.
Unyaka wawungu 1931 , kwaye njengabaninzi abasanda kusebenza, ii-Butts zazinexesha elininzi lokuzigcina. Ugqibe kwelokuba eze nomdlalo omtsha oxhomekeke kwinhlanhla nakwinxalenye yesakhono.
UAlfred Mosher Butts, wafunda amaphepha aphambili kwiphephandaba iNew York Times ukubala ukuba kunikezelwa kangaphi iileta ezithile kulwimi lwesiNgesi (kodwa wanciphisa ukwenzeka kwe "S" ukuze umdlalo ungabi lula kakhulu), kwaye unike ixabiso ngalinye ngokusekwe kunqabile kwalo.
Akukho bhodi yayifuneka kuba iithayile zazicwangcisiwe ngokwesikimu segama eliphambeneyo. Unike lo mdlalo igama Lexicon .
Isicelo sakhe selungelo elilodwa lomenzi asamkelwanga, kwaye nabenzi bemidlalo babengenamdla, ke ngo-1938, walungisa umdlalo ngokongeza i 15 x 15 ibhodi ngezikwere ezinamanqaku aphezulu kunye no Iithayile ezisixhenxe lectern (amanqaku aseleyo). .
Utshintshe negama waba ngu Amagama aqingqiweyo eCriss , kodwa kwakhona IOfisi yePatent kwaye abenzi bomdlalo bebengafuni kwazi nto. Emva kokugqiba ezimbalwa, wabuyela emsebenzini wakhe wangaphambili njengomzobi.
Ngo-1948, uJames Brunot , umnini womnye wemidlalo embalwa, uthe wayekulungele ukuzama ukuyithengisa ngempumelelo. Ukutshintshiselana nelungelo lokushicilela, UBrunot ufumene amalungelo awodwa omenzi wechiza .
Ndisasazile isikwere samabhaso, ndenza lula imigaqo, kwaye utshintshe igama laba ngu Scribble , yintoni Kwaphawulwa ngawo loo nyaka u-1948 nase-Great Britain ngo-1953 .
Ukusebenza ekhaya, wathengisa ngaphezu kwe-2,000 1949 yemidlalo ngo-1952. Ngo-XNUMX igama laphuma kwaye ukuthengisa kwaqala ukunyuka, kanye njengoko uBrunot wayesele eza kuphosa itawuli.
UJack Strauss, umphathi kwivenkile yesebe likaMacy, wadlala ngelixa eseholideyini. Xa ebuyayo wacela isebe lakhe lemidlalo ukuba limthumele ezinye, kodwa kwakungekho sitokhwe.
I-Macy yaqala ukuxhasa iinzame zentengiso, kwaye ngenxa yokuba iBrunot ingakwazanga ukuqhubeka nokuthengisa okwandileyo, yanika imveliso I-Selchow kunye neRight . Amalungelo angaphandle kwe-United States, Canada ne-Australia athengiswa kwi-JW Spears, inkampani yase-Bhritane. Isicelo sokuqala sase-patent senziwa kuphela ngo-1954.
Iinguqulelo ezahlukeneyo ziyafuneka kwiilwimi ezahlukeneyo kuba ukushiyana koonobumba kunye noonobumba ngokwabo kuyahluka (umzekelo, iSpanish ineeleta uLL kunye no-CH). Ngaphezulu kwe-100 yezigidi zemidlalo esele zithengisiwe ngeelwimi ezingama-29. UJames Brunot wasweleka ngo-1984 kunye no-Alfred Butts ngo-1993.
Imithetho iya kuhlala ixhomekeke kubani odlala nabo kwaye ngokuqinisekileyo ngekhe anyanzeliswe ngokupheleleyo.
Scribble ingadlalwa linani phakathi kwabadlali ababini ukuya kwabane .
Kukho ibhodi yesikwere enezikwere ezi-15 ecaleni.
Umntu ngamnye uya kuba nelungelo leeleta ezisixhenxe kumjikelo ngamnye.
Umdlalo uqala ukuba uthathe unobumba osondeleyo ku-A okanye A.
Unobumba ngamnye unenombolo enexabiso elifanayo.
Ibhodi inezikwere eziphinda-phinda ixabiso loonobumba okanye amagama, ukuba unobumba okanye igama lidlula elo xabiso. La maxabiso anokuphindwa kabini okanye kathathu.
Ukuba umdlali unokwenza igama usebenzisa oonobumba abasixhenxe esandleni sakhe, yena ngokuzenzekelayo amanqaku angama-50 .
KwiScribble, ayisiyokwakha amagama kuphela, isicwangciso kukuqokelela amanqaku ngoonobumba abalungileyo kunye nezikwere ezilungileyo.
Emva kwentshukumo yokuqala, abadlali kufuneka basebenzise okungenani unobumba omnye osele ebhodini yomdlalo.
Umdlalo uphela xa oonobumba bomdlalo bephela kwaye bonke abadlali benze inyathelo labo lokugqibela. Amanqaku apho umdlali ngamnye ahlala khona esandleni asuswe kwitotali yabo.
• Ukuba onke amaqhekeza eScribble avelisiweyo ukuza kuthi ga ngoku abekwe ecaleni, bekuya kuba nakho ukwenza umgca oqhubekayo onokukwazi ukujikeleza uMhlaba izihlandlo ezisibhozo.
• Amajoni amabini ayevaleleke kwi-crevasse e-Antarctica ngo-1985. Badlala iScrubble ngokuqhubekayo kangangeentsuku ezintlanu, bade bahlangulwa.
• Iinkcukacha-manani zithi zingama-30,000 imidlalo eQaliswayo eziqaliswayo iyure nganye edlulayo.
• Ulwimi lokugqibela apho iScrabbrle yaveliswa khona sisi-Welsh, uguqulelo lwayo lwaziswa ngo-2006.
• Kuqikelelwa ukuba ubuncinci kukho iziqwenga zemidlalo ezilahlekileyo ezisasazeke kwihlabathi jikelele.
• Ngo-1993, i-Scribble Dictionary esemthethweni yase-North America yakuphelisa konke ukuthuka nokuthukwa.